Dagaal Iyo Qarax Ka Dhacay Degmooyinka Hodan Iyo Yaaqshiid. – Bogga Calamada.com
Dagaal Iyo Qarax Ka Dhacay Degmooyinka Hodan Iyo Yaaqshiid.
January 2, 2018 4:24 am Views: 156
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin qeybta ka dagaalanta gudaha magaaladan Muqdisho waxey dagaal culus ku qaadeen fariisin maleeshiyaatka Nabadsugidda dowlada Ridada ay ka sameysteen qeybo ka mid ah degmada Hodan ee magaalada Muqdisho.
Dagaalkan waxey ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ku qaadeen fariisin maleeshiyaatka Ashahaado la dirirka ay ka sameysteen xaafada Black-sea ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho,dagaalkan waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kaasi oo dhawaaqiisa si aad ah looga maqlayay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho.
Warar hoose oo laga helayo fariisinka laweeraray waxey sheegayaan iney jiraan tiro askar ah oo maleeshiyaatka dowlada Ridada dhimasho iyo dhaawac kaga noqotay dagaalkaasi.
Dhanka kale Weerar loo adeegsaday Bam gacmeed ayaa lagu qaaday xarunta Laanta Xaafada Towfiiq degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho,iyadoona Bamka uu ku qarxay gudaha xarunta.
Saraakiil iyo maleeshiyaat ka tirsan maamulka Farmaajo ayaa xilliga weerarka ku sugnaay gudaha xarunta,waxa uu Bam gacmeedka sababay khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo soo gaartay xubnihii dowlada ee ku sugnaay gudaha xarunta Laanta Towfiiq.